Khasaaro ka Dhashay Dagaal Beeleed ka Socda Gobolka Hiiraan. – Heemaal News Network
Warar dheeraad ah ayaa waxaa laga helayaa dagaal sababay khasaaro dhimasho & dhaawac ah oo Maanta duleedka degmada Matabaan ee Gobolka Hiiraan ku dhex-maray laba maleeshiyo Beeleed oo halkaasi wada dega.
Dagaalkan ayaa ka dhacay deegaanka Nagaarta oo hoostaga degmada Matabaan ee gobolka Hiiraan, waxaana uu salka ku haaya Baraago iyo lahaansho deegaan,dhowr jeer oo horey sidaan oo kale ay dagaalo uga dhaceen.
Labada maleeshiyo Beeleed ee uu dagaalka dhex-maray ayaa waxaa ay kasoo kala jeedaan gobolada Hiiraan & Galgaduud, waxaana dagaalkooda uu yahay mid dhowr jeer soo laab laabtay. Isla markaana uu buray heshiis la kala dhex-dhigay.
30kii Bishii la soo dhaafay ee November 2020 ayaa Saraakiisha qeybta 27aad & taliyeyaasha Booliska degmooyinka Guriceel & Matabaan ee Gobolada Galgaduud & Hiiraan waxaa ay ku guuleysteen inay heshiis dhex-dhigaan labada Beelood, hayeeshee markale uu dagaalkooda soo cusboonaaday.